Wax soo saarka Beeraha - Midhaha, Miraha iwm Wararka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Wax Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Tiger Nut
Waa maxay Tiger Nut? Tigers lowsku maaha; runti, waa nuts. Waxay yihiin digriiga la cuni karo (sida baradhada) oo la wadaaga astaamaha kiimikada digriiga iyo lowska labadaba. Magacyadooda waxay ka helaan maqaarka ay xariijimaha ka jeexeen waxaana sidoo kale loo yaqaan Tigernuts, Yellow Nutsedge, Chufaor Earth Almonds Halkee ayay ka yimaadaan Noocyada Tiger? Gudaha […]Read More
Adeegsiga Iyo Faa'iidooyinka Caafimaad ee Budada Turmeric
Waa maxay budada Turmeric? Budada Turmeric waa udgoon huruud ah oo midab huruud ah leh oo laga soosaaray rhizome ama curiyaha xididka dhirta Curcuma longa. Waxay u adeegsan jirtay kumanaan sano daaweynta Shiinaha iyo Hindida. Budada waxaa laga soosaaray rhizomes cows qalalan. Curcumin, oo ah qaybta firfircoon ee ku jirta cagaarshowga, ayaa la ogaaday inuu leeyahay ballaadhan […]Read More
Xaqiiqooyin Cajiib ah iyo Faa’iidooyinka Yaanyada
“Way adag tahay in laga fekero wax aan ka ahayn fikradaha wanaagsan inta aad cunayso yaanyo-soo-baxa.”, Lewis Grizzard Waa maxay Yaanyada? Tamaandhada, oo ah warshad ubax ka sameysan qoyska habeynnada, ayaa si ballaaran loogu beeray miraha ay cunaan. Loogu calaamadeeyay sida khudradda ujeedooyinka nafaqada, yaanyada ayaa ah isha wanaagsan ee laga helo fitamiin C-ga iyo lycopene phytochemical Midhaha badanaa waa […]Read More
ALMOND_ Ilaha Dhamaystiran ee Nafaqada
Waxaan geedka yicibta ku idhi, Walaashayow, ila hadal Ilaah. Geedkii yicibkuna waa magoolay. , Nikos Kazantzakis Almond waa nooc ka mid ah geed asalka u ah Iran iyo wadamada ku xeeran laakiin si ballaaran loogu beero banaanka. Yicibku wuxuu la mid yahay magaca abuurka macaan ee aadka loo beeray ee geedkan. Way buuxsan tahay […]Read More
Faa'iidooyinka layaabka leh ee Canab ee Caafimaadka
Waa maxay Cinabyadu? Canabku waa cagaar, guduud mugdi ah, ama midab-madow-purplish-madow oo loo isticmaalo in lagu sameeyo khamri ama loo cuno sida miro. Canabku waa miro macaan oo yar oo laga beero adduunka oo dhan, dhadhanka iyo faaidooyinka caafimaad ee canabkuna waa kuwo caan ku ah dadka da 'kasta leh. In kastoo inta badan la cuno ceyriin, […]Read More
Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Fishashka - Kuwa ugu badan ee dhoofiya fersken ee adduunka
“Waxaad noqon kartaa miro guduudka ugu bisil uguna macaan adduunka, welina waxaa jiri doona qof neceb fuulashada.”, Dita Von Teese Waa maxay Fiiq? Fariin waa nooc ka mid ah miraha loo yaqaan botan ahaan dhibic. Hilibkiisu wuxuu u dhexeeyaa midab huruud iyo cadaan ah, oo siinaya caraf macaan, casiir leh, caraf udgoon leh. Bershuhu waxay bixiyaan […]Read More
Karootada Suuqyada Beeraleyda
Waa maxay Karootada? Karootada waa khudrad aad u fiican, liin dhanaan ah. Iyaga laftoodu waa khudradda cayriin ee caanka ah, ama la jarjarey oo lagu tuuray saladhyada. Sidoo kale waad karin kartaa karootada, ama xoqin kartaa oo sameyn kartaa keega karootada. Karootada ayaa ah isha ugu wanaagsan ee laga helo fiitamiinno iyo macdano badan, gaar ahaan fiitamiin A (laga helo beta-carotene), biotin, vitamin K, potassium, iyo vitamin […]Read More
Faa'iidooyinka Guava ee maskaxda ku haya maskaxda iyo maqaarka
Waa maxay Guava? Guava waa miro yar oo macaan oo kulaylaha ah. Geedka ay guavas ku korto waxaa sidoo kale loo yaqaan Guava. Badanaa, guavas waa cagaar oo leh maqaar yar oo uus leh waxayna badanaa yihiin jaalle ama ku dhowaad maroon. In kasta oo Guava uu u ursado sida liinta, haddana wuxuu leeyahay hilib casaan qafiif ah, casiirkiisuna waa sonkor iyo fudeyd, mararka qaarkood […]Read More
Noocyada Cuntada Cad ee ugu Wanaagsan ee Cunto karinta
“Haddaad bariis isiiso, maanta waan cunaa; haddii aad i barato sida loo beero bariiska, maalin walba waan cuni doonaa. Tani waxay badaleysaa dhadhanka, muuqaalka, iyo qaabka bariiska waxayna caawineysaa in laga fogaado xumaanta iyo kordhintaRead More
Waxa ku saabsan Vanilla
Vanilla Vanilla waa xawaash laga soo qaatay orchids-ka genus vanilj. Ereyga vanilji waxaa laga soo qaatay 'vanilla'; yareynta vaniljku waa dhadhan, udgoon, ama caraf ka timaadda noocyada reer Mexico. Mid ka mid ah xaqiiqda xiisaha leh ayaa ah in erayga vanilj uu ka soo jeedo ereyga Isbaanishka ee "banza" oo macnaheedu yahay boodh ama […]Read More